आमाबाबु दुबैले छोडेपछि यी बालकले भने- ठुलो भएर ऋ’ण तिर्छौ भाइलाई बचाइदिनुहोस्…सक्दो सेयर गरौ ! – yuwa Awaj
मंग्सिर ११, २०७७ बिहिबार 6
काठमाडौ : अस्पतालको बे’डमा सानो बाबु सुतिरहेका छन् । उनी ब्लbड क्या’न्सरले निक्कै थलिए’का छन् । सुक्क-सुक्क गर्न बाहेक केही बोल्न सक्दैनन् । उनका दाजुपनि सानै छन् । छेउमा बसेका छन् । बारम्बार सुम्सु’म्याउछन् ।
बाबुलाई जन्मदिने आमाको अनुहारपनि याद छैन । बाबुलाई भने देख्यो भने चिन्न सक्लान् । उनीहरुका बाबा आमा यही ध’र्तीमा छन् । तर सानै उमेरदेखि छोडेर अन्य’त्र छन् । उनीहरुलाई अल’पत्र छोडेर हिँडेका छन् । बाबु आमाले साथ छोडेपनि दाजु भाई संघर्ष गरेर बाँचिरहेका थिए । यस्तै दु’खियाको घरमा बज्र’पात परेर आयो ।
आमा बाबु जिउँदै भएपनि टुहु’रा, बेसा’हारा बनेका यी नेपाल आमाका सन्तानमा अब ठूलो वि’पत्ति आइलाग्यो । करिब एक दशक देखि दाजुभाई आमाबुवाको संरक्षण बिनानै हु’र्किएका थिए । बाबु १३ बर्षको भएका छन् । आमाबुवाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने दाजुभाईले अनुभ’व गर्ने मौका पाएनन् । त्यही दाजुभाईको यस्तो जोडीलाई फेरी दै’व लाग्यो ।
भाईको अवस्था निकै चिन्ता’जनक छ । अस्प’तालको शै’यामा भाईलाई सुताएर दाई भाईको जिवन रक्षाको भिख मागिरहेका छन् । बाबुआमाको न्यानो काख र माया त उनीहरुले पाएनन् अहिले दाजुभाईकै माया पनि छुट्ने हो की भन्ने त्रा’समा बारम्बार भक्का|निन्छन् । कालिकोट शान्ति त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं १ का हिमराज गिरी जसलाई अहिले ब्ल’ड क्या’न्सर भएको छ ।
उनको स्वास्थ्य उप’चार र जीवन रक्षाका लागि नविन गिरी अहिले भि’ख मागिरहेका छन् । आमाबुवाले सानैमा साथ छोडेर गएका कारण एक्लिएका नविन अहिले भवि’ष्यको सहारा सम्झेका भाईलाई पनि ब्ल’ड क्या’न्सर भएपछि उनी भाईको साथ छुट्ने हो की भन्ने ड’र छ । दाजुभाई सानै छँदा आमाले अर्कैसँग विवा’ह गरिन् ।
जन्मदिने आमाले अर्का’विवाह गरेपछि बुवाले पनि सौते’नी आमा भि¥त्र्याए । पछि बुवा पनि सौ’तेनी आमाकै घरमा गएर बस्न लागेपछि यि दाजुभाईको अ’भिभावकको छाँया खोसियो । भाईलाई कालिकोटमै हुँदा ज्व’रो आउने र निकै थका’इलाग्ने भएकाले उप’चारका लागि सबैको सहयोग जु’टाएर काठमाडौं आएर अस्पताल पु¥र्याए ।
अस्पतालमा चिकित्स’कले भाईलाई ब्लड क्यान्सर भएको सुनाएपछि नविनको पाइताला मुनिको जमिन भासियो ।
१३ वर्षको भाई अस्पतालको शै’यामा छन्, उनी सो भाईको जीवन रक्षाको लागि रोएर अपिल गरिरहेका छन् । उनले आँ’शु झार्दे भने, अहिले मेरो भाईलाई जसरी भएपनि बचाईदिनु भाई नि’को भएपछि म सबैको ऋ’ण तिर्छु ‘।
चिकित्स’कले उनको भाईको उपचार सम्भव भएको तर त्यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन् । आमाबुवाकै संरक्षण नपाएका यि दाजुभाईले ठूलो रकम कसरी ल्याउने ? त्यसैले सबैसंग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि ९८६१९९६१९८ र ९८४४८९१६५६ मा सम्पर्क गर्नुहोला । सक्नेले आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोला । नसक्नेले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर एक सेयर गरिदिनुहोला । तपाईको सेयर सहयोग गर्नेसम्म पुग्नेछ । यसैले यी बाबुको जीवन बाँच्नेछ ।-गोर्खाली खबर
Prevविश्वकै सय जना महिलाभित्र पर्न सफल सपना मगरको सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Nextगायिका समीक्षा अधिकारीको नयाँ गीत रातारात भाइरल…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
नेपाली चेली अंशु गुरुङ : बेलायती सेनाको उच्च पदमा बढुवा…हेर्नुहोस् ।